भाइरलमन्त्री आले फेरि चर्चामा, आज पनि देखाए धमाका ! – GALAXY
भाइरलमन्त्री आले फेरि चर्चामा, आज पनि देखाए धमाका !
१ कात्तिक, काठमाडौं । बेलाबेला चर्चामा आइरहने मन्त्री आलेले फिल्डमै पुगेर एक्सन लिएका छन् । मन्त्री बनेपछि आलेले जनताका पक्षमा धमाका देखाउन थालेका हुन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएका कमी–कमजोरीलाई अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
उनले गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको बताए । आइतबार छुटेका यात्रुलाई सोमबार गन्तब्यमा पुर्‍याइएको छ । मन्त्री आलेले नेपाल वायु सेवा निगमलाई हवाइ टिकटका लागि ई–टिकेट ९अनलाइन० को व्यवस्था गर्न निर्देशन समेत दिएका छन् ।